nyore, Chipa Nzira To yakajeka Smile Your | Nzira Yakanakisisa kuzvichenesa zvikadaro Mazino Guide
Nzira Yakanakisisa kuzvichenesa zvikadaro Mazino Guide
kuzvichenesa zvikadaro meno , mazino rakanga rachena , Zino rakanga rachena zvinogadzirwa
Home Based kuna kuzvichenesa zvikadaro Mazino
Kuzvichenesa zvikadaro Mazino Tips
nyore, Chipa Nzira To yakajeka Smile Your
Pane njodzi nzira yokuwana akachena kunyemwerera? Kwete zvese kana anogona kuvimbwa. Nyaya ino ichapa meno zvakaisvonaka nokungwarira uye zvakanaka.
Danho rokutanga kuti ndichene, chichiwedzera mazino zvakanaka, nyanzvi kuchenesa. Dental cleanings vanofanira kuva nepurogiramu, apo iwe kuronga kugadzwa mumwe mwedzi mitanhatu ose. zvisinei, dzose nyanzvi kuchenesa zviri nyore kuregerera asi inowanzopiwa kuchizvivanza emhando dzakawanda inishuwarenzi mazino.
ZANO! Mushure kuzvichenesa zvikadaro mazino ako, kungwarira chii iwe kunwa kana kudya. Vachatora Sechipanji echitema uye mavara nyore izvo zvinogona kukonzera discoloration.
Laser zviitwe mumwe inonyatsobudirira nzira kuti zvinogona nokukurumidza migumisiro. Izvi zvichava nzira yakanakisisa une meno vako dzokera shure kwavo kwokutanga chena sezvo zvinogona kuva. A bleaching inotoda sokusingaitiki pamusoro mazino ako, ipapo mumwe Laser iri kushandiswa kuti Activate. Mazino ari pakarepo kuburikidza kanenge kashanu kana matanhatu noruvara.
Zvakakosha kuti zvinosanganisira mbishi michero uye miriwo zvaunodya, kubatsira kuchengeta mazino enyu akasimba uye utano. Mafuta zvokudya zvinowedzera mukana in uye zvinogona kukonzera discoloration mazino ako. Dzivisa mhando idzi zvokudya nokuti zvawo anokanganisa utano mazino ako. Unofanirawo kudzivisa kuramba snacking apo aiming kuti kunyemwerera wakasimba.
ZANO! Dzivisa mazino-staining zvinwiwa kana uri kutsvaga mazino machena. Mhando idzi edoro anosanganisira chemubhotoro, kofi uye dema tii.
Unofanira kungwarira chaizvo kana kudya kana kunwa pashure pokuva mazino whitened. Whitened mazino Sechipanji nyore siyana mavara kana echitema kubva zvokudya uye zvokunwa. Garai kure yerima kana staining zvokudya uye zvinwiwa waita akanga mazino enyu whitened. Coffee muenzaniso chinhu chichaita soka kupinda mazino ako uye kuti ruvara kuchinja.
Edza kunwa kuburikidza ane uswa kubatsira mazino ako kuramba chena uye yakajeka. Kushandisa uswa inoita kashoma kuti zvinwiwa iwe uparadze kuchaita chidodzi mazino ako. The mvura kuchaita yokunzvenga mazino ako uye kuburuka huro yako.
ZANO! A nyanzvi zviitwe kungava zvinodhura, asi pamwe ndiyo nzira yakanakisisa kutanga rakanga rachena mazino ako. Kunyange nzira iyi chinodhura, rinotipa nani uye dzichimhanya rakanga rachena ruzivo pane dzimwe nzira.
Micheka kuti kuzvichenesa zvikadaro meno nyore kwose kwose uye vari nokururamisira chipa. micheka izvi basa rokuchenesa pose echitema kubva mazino ako uye mishonga zvavari kubatwa kuzvichenesa zvikadaro them.Whitening rinoparadza vakarasikirwa kukurumbira ichangopfuura, nekuti havana kupa migumisiro yakanakisisa.
Zviri kuchikosha kuti pose iwe kuti mazino enyu whitened, pashure ose kudya unofanira kukwesha mazino enyu. Zvasara zvokudya inoramba kungakonzera kwemabhakitiriya kukura pamusoro pemvura mazino ako. Kana musingadi kubvumira mazino ako kuomesa shure kukwira, mabhakitiriya kungaita yakawanda matambudziko, saka nechokwadi iwe kukwesha.
ZANO! Kana uri vanoda kunyemwerera chena pakarepo, unofanira kushanyira chiremba wemazino yenyu pakarepo. Pose ukaedza kuwana akachena uchinyemwerera, uchimhanya pangozi kukonzera zvakaipa pane kuita zvakanaka kuchinja.
Unofanira kuteerera chero nehanya kuti rakanga rachena kurapa. Zvinogona zvikuru zvinorwadza uye dzinogona kuva pfupi nguva asi achiri zvichirwadza. Kana izvi zvaitika, nechokwadi unoona chiremba wemazino usati mberi kushandiswa rakanga rachena chigadzirwa. Azvizive anenge akasiyana chisarudzo kuti vasakanganise imi iyi mazino ako.
Kusvuta meno zviitwe hadzishandi pamwe. Kana uchida mazino machena yakanaka, unofanira kurega kusvuta. Kana iwe mari riri rakanga rachena kurapwa uye kuchengeta kusvuta, kutambisa mari. kuti basa rose kuzvichenesa zvikadaro mazino wenyu richaparara kana uchisvuta.
ZANO! Ndisati ndatanga mazino zviitwe, kutaura chiremba wemazino wako. Kana uchiziva kuti uchafanira vanoda zvikuru mazino basa rinoitwa munguva yemberi iri pedyo, kunonoka mazino enyu rakanga rachena nzira kusvikira rapera basa.
Ramba chete kushandiswa chikwesheso stowed kure nokuda kana muchidya zvihwitsi kana zvimwe zvihwitsi. zvokudya izvi anogona kunamatira mazino ako nyore, uye vanogona kutanga usachikanganisa pavo. Mushure waita vakanakidzwa zvinozipa, tora kanguva kana maviri kukwesha mazino enyu. Mushonga wemazino harudikanwi kana muchiita kusuka mazino ako uye sukurudza navo zvakanaka.
Kukwesha aine mazino rakanga rachena mushonga wemazino. Kunyange zvazvo toothpastes izvi hazvina simba sezvo dzimwe whiteners, ivo huchabvisa chero kuchangobva echitema uye kudzivirira mazino enyu kubva echitema itsva. toothpastes izvi ane munyoro hasha yakagadzirwa silica kuti achashanda pasina kukuvadza enamel.
ZANO! Zvakakosha kukwesha, pamatadza masaja, uye floss kaviri pazuva kanenge. Meno ako richaramba zvikuru akachena kana iwe kukwesha uye floss nguva dzose uine kudya kana tudyo.
Sukurudza muromo wako pashure ukanwa kana kunwa. Meno ako tichagara akachena kana hapana ane nguva kuchenesa navo pashure mabhodhoro zvokudya kana zvokunwa. Izvi zvinogona kubatsira kudzivirira echitema uye in.
Kushandisa mazino rakanga rachena matanga kunogona kukubatsira kuzvichenesa zvikadaro mazino ako. zvisinei, zvakakosha kuti kungwarira pakushandisa pavo, nokuti vanoshanda se chibi. Kuti tiwane migumisiro yakanakisisa inobva nzira iyi, unofanira kuzvishandisa zvakanaka uye kudzivisa overdoing naro.
ZANO! Vamwe rakanga rachena toothpastes havasi vose vanoti. Vanogona kubatsira kuzvichenesa zvikadaro mazino ako, asi vari kushandiswa pachiimbwa nedzimwe nzira.
Unoda kuenda wemazino kuwana mazino ako vakachenesa kanenge kaviri gore negore. Kumbira yebazi kuonana iwe inenge vhiki kugadzwa kwenyu pamberi pedo.
Taura chiremba wemazino yako pamusoro healthiest nzira kuzvichenesa zvikadaro mazino ako usati watenga chinhu. chiremba wemazino Your anogona kukuudza zvakanakira ako ezvinhu uye ndikuyambirei pamusoro divi zvinokonzerwa.
ZANO! Vaka flossing kupinda regimin yako. Flossing zuva nezuva kunobatsira kubvisa muromo wenyu nebheji, inova imwe zvinokonzera mazino discoloration.
Kunwa mvura kazhinji achakubatsira meno akachena. Rinsing nemvura inzira yakanaka kudzivisa echitema kubva appearing.Make tsika kunwa mvura pamwe zvokudya zvenyu uye panguva kudya.
Waini mushaba vari muvengi wako pakutsvaka kwako nokuda mazino machena. Zvinwiwa izvi zvinogona aizonyatsovachenesa kana discolor mbeu mazino ako. Todzitsiva hutano zvinwiwa. Kana uchida kunwa zvinwiwa izvi zvakadaro, nechokwadi iwe kukwesha mazino enyu nekukurumidza kuderedza ari staining maturo.
ZANO! The bark pamusoro walnuts muti unogona kushandiswa zvinyoronyoro kusuka kure echitema pamusoro mazino ako. Kushandisa kuhukura ichi nguva dzose kunogona kubvisa echitema izvi uye yeyero discoloration rinowanzogamuchirwa kuonekwa fodya kana kunwa zvimwe zvinodhaka.
Michero veggies ane fibrous kusachinja-chinja inogona kushandiswa sezvingatarisirwa kusuka mazino ako. Vamwe zvokudya zvinoshanda vari broccoli, gaka, makerotsi, uye makerotsi. Edza swish zvokudya riri mumuromo menyu kuti zvakawanda nharaunda rakafukidza.
Baya jekiseni zvakawanda dheri zvinhu kupinda zvaunodya. simba, meno utano anogona kunzi kune zvinovaka muviri ari zvekudya akafanana yogati, mukaka uye chizi. zvicherwa izvi zvakare kugadzirisa enamel nemazino ako, izvo zvinoita mazino enyu zvishoma kubatwa zvokudya uye zvimwe zvinhu yemanyorero kukonzera discoloration. Izvi zvinoreva kuti kusanganisira zvokudya akadai aya zvaunodya kuchakubatsira kuva kunyemwerera ari akachena.
ZANO! Home pamishonga chokuwana mazino akachena vanowanzotevedzera kuva pasi divi–dzimwe nguva vanogona kutungamirira vasanonoka, kuzvimba mazino kuti vari pasi ropa. Usazengurira kubvunza chiremba wemazino wako kana iwe nekusangana chimwe chaizvozvo mazino nyaya.
Mabhakitiriya kuchakura kumativi muromo vako vanokutevera udye. Kana musingadi kubvumira mazino ako kuomesa shure kukwira, mabhakitiriya kungaita yakawanda matambudziko, saka yeuka kukwesha navo.
Dzivisa rima zvinodhaka uye zvibereko kuramba mazino ako chena. vamwe zvinwiwa, akadai waini tsvuku uye kofi, anogona kusiya echitema pamusoro mazino ako. Kana havambofi kurega zvinwiwa izvi, sveta achishandisa uswa yokunzvenga staining maturo.
ZANO! Kuti kuzvichenesa zvikadaro mazino ako unogona kungozviona navo peroxide namatidza uye kubikira pasoda. Zvose izvi zviri zvinhu zviri dzakawanda yezvokutengeserana rakanga rachena toothpastes, asi vanogona kuwanikwa pandiri yako kumba.
Izvi zvinhu zvinogona kukonzera echitema yakadzika nemazino ako. Kana iwe unofanira kunwa kofi kana tii, unogona kushandisa uswa kunwa navo, kukwesha mazino enyu pashure pokupedza mukombe wako, kana mazino bhuracha pakarepo pashure nokumwa Zvapera. Kunwa tea kofi, pamwe kusvuta, ndiwo zvikuru mari discoloring mazino zvevanhu.
Shandisa dzinongoitika mushonga kuti kuzvichenesa zvikadaro mazino ako, kufanana womuapuro cider vhiniga. Izvi zvakaratidzwa kubvisa echitema uye kubvisa utachiona vari vaya muromo. Kuti vabudirire pamwe kurapwa, kakaridza zuva chete vhiniga, mangwanani iri nani, watevera nayo aine mazino Kukwesha.
ZANO! Sarudzai zvakarurama chikwesheso. Taura chiremba wemazino wako kuwana chake mazano chii chikwesheso munofanira sarudza.
Pane dzinongoitika mazino whiteners kuti mukwanise kuwana panze pane kutenga, nokudaro kukuponesaiwo mari. The bark pamusoro walnuts muti chinhu chakanakisisa kurapwa kushandiswa kuzvichenesa zvikadaro mazino. Get kuhukura womuti, sukurudza kwazvo uye varikwizire mazino ako nawo. Izvi inoshandira kubvisa echitema uye nebheji.
Unofanira kuziva kuti chero zviitwe mushonga chete kuzvichenesa zvikadaro dzinongoitika mazino. Kana moda veneers, kufanana korona, mumakomba, veneers kana mamwe marudzi mazino basa nechemberi mazino kumberi, vachaita kugara chete ruvara. Rakanga rachena zvakasikwa mazino angaita basa mazino kuti raitwa anobudira kunze yekudyidzana.
Bvunza orthodontist yako kana chiremba wemazino asati kusarudza kuzvichenesa zvikadaro mazino ako. Musatanga rakanga rachena mazino ako kana kuita chero nyaya.
A uchisvuta zviri nyore kuti kusvibisa nokuti avo yeyero echitema pamusoro mazino. Zvinogona nani zvakaoma kuramba chena kunyemwerera kana uchisvuta. Kana uine kusvuta, unofanira kutema shure nokuda utano hwako uye pakuonekwa mazino ako.
Shandisa divi romukati chinhu orenji svuura kuti chokuzora echitema uye kuti mazino enyu akachena. Uchigonawo kusanganisa kuomeswa orenji rinokwatuka uye pasi Bay mashizha kuti mafuta anonhuhwirira toothpaste.Make nechokwadi kurigeza muromo wako Paunopedza kwokugeza mazino kubvisa zvose imwe michero shuga yacho.
Garai kure mouthwashes mavara sezvo Zvadziine vakawedzera colors.Mouthwashes ane Dhayi kuwedzera ruvara kunogona kukonzera discoloration pasingadiwi kuoneka pane mazino ako.
Kukwesha mazino ako ndiyo yakanaka inodzivirira nechiyero. Unogona nguva dzose kuwana mamwe mushonga wemazino zvakananga akaita kuti kuzvichenesa zvikadaro mazino ako. Pane yakawanda yakasiyana-siyana, saka kutsvakurudzwa kunogona kukubatsira kuwana munhu anoshandira mazino ako.
Edza kunatsa mweya wako kuwana akachena uchinyemwerera. Zviongorore mweya wako licking yakachena chikamu ruoko rwako. Kana unogona hwema mate, shandisa chemindi kana vamwe mouthwash. Kana kuenda mouthwash, nechokwadi kuti doro-akasununguka kudzivisa vachiyanikira muromo wako.
rakanga rachena Mazino
Rakanga rachena mazino Rinokonzera chaizvo kukurukurirana. Tinovimba kuti pashure kuverenga nyaya ino kuti uchawedzera nechivimbo pakutevedzera dzimwe pfungwa chapiwa nokuda rakanga rachena mazino. Shandisa mashoko aya kuti zvakanaka kuvandudza wako zino ruvara.
Posted by kuzvichenesa zvikadaro Mazino Guide -
Categories: Home Based kuna kuzvichenesa zvikadaro Mazino Tags: Sechipanji echitema, Yakajeka Smile Your, Dental cleanings, Laser rakanga rachena mazino, mazino kutarisirwa, mazino machena, chena mazino Mazano, kuzvichenesa zvikadaro mazino ako, akachena nyemwerera
Iva Confident In Smile Your uye White Mazino
Advice Inobudirira Kana uchida kuzvichenesa zvikadaro Mazino Your
Rakanga rachena Mazino Tips Unogona Edza Out Today!
Kubvisa Kuti Yellow kunyenama Uye Get A Bright White Smile
Ita Smile Your Dazzle With Tips idzi
Sechipanji echitema Soda yekubikisa runako nyemwerera nzira yakanakisisa kuzvichenesa zvikadaro mazino Yakajeka Smile Your Kupenya kunyemwerera kwako Bright White Smile Dazzle Smile Dental cleanings chiremba wemazino kuti kamuri Get A Bright White Smile musha mazino zviitwe musha zviitwe sei kuti kuzvichenesa zvikadaro mazino sei kuti kuzvichenesa zvikadaro mazino ako Laser mazino zviitwe Laser rakanga rachena mazino dzinongoitika nzira kuzvichenesa zvikadaro mazino Bvisa Discoloration Bvisa Mazino echitema Smile Dazzle Strawberry mazino bleaching Kit mazino chichiwedzera mazino kutarisirwa mazino utano mazino echitema mazino zviitwe mazino shora Tips Kudzivisa Mazino echitema mushonga wemazino Zino rakanga rachena zvinogadzirwa vhitamini C Rakanga rachena Mazino Tips Unogona Edza Out Today! rakanga rachena mazino ako kuzvichenesa zvikadaro mazino angu kuzvichenesa zvikadaro meno kuzvichenesa zvikadaro mazino kumba kuzvichenesa zvikadaro mazino ako Kuzvichenesa zvikadaro Mazino Your Nyore akachena nyemwerera chena ikapenya mazino mazino machena chena mazino Mazano Yellow kunyenama
WordPress Theme kubudikidza HeatMapTheme.com